मोदीको फोनपछी वामपन्थी सरकार धरापमा ! » नेपाल प्लस
मोदीको फोनपछी वामपन्थी सरकार धरापमा !
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेतासित फोन संवाद गर्नासाथ अनौठो राजनितिक वातावरण देखिएको छ । बन्ने भनिएको वामपन्थी नेत्रित्वको सरकार बिरुद्द अनेक शंका, तर्क र बखेडाहरु सतहमा तैरिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता केपी ओलीसित मोदीले के संवाद गरे ? मोदीले के आश्वाशन दिए भन्ने स्पष्ठ ति नेताले पारेका छैनन् । तर मोदीसितको संवादपछी एकाएक वामपन्थी नेत्रित्वमा बन्ने भनिएको सरकारका बारेमा विवादहरु देखिएका छन् । मोदीले प्रधानमन्त्री देउवालाईपनि फोन गरेर के आकाशवाशी सुनाए । मोदीसित वार्तापछी देउवापनि माओवादी र एमाले नेतासितसंवाद संवादकालागि खुला देखिएका छन् । मोदीको वार्ताले अन्य शंकापनि पैदा गराएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संवादले नेपालको निर्वाचन आयोगमाथिसमेत हस्तक्षेप गरेको वा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसमेत भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा परेको आरोप लाग्न थालेको छ । त्यो आरोप निराधार जस्तोपनि लाग्दैन । किनभने समानुपातिक मतहरुको परिणाम सार्बजनिक गर्न नमिल्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयाेधि प्रसाद यादवले बताउँदै आएका थिए । तर दलका नेताहरुसित नरेन्द्र मोदीको टेलिफोन संवाद लगत्तै मत परिणाम सार्बजनिक गर्न मिल्ने बताईयो । बिदेशी प्रधानमन्त्रीले कसरि हाम्रो देशको प्रमुख निर्वाचन आयोगमा यसरि प्रभाव जमाउन सक्छ ? कसरि दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई यसरि बिदेशीको भनाईले प्रभाव पार्ने बनाउन, दबाब दिन सक्छन् ? यो कस्तो संविधान हो बिदेशीले चाहनासाथै गाँठो फुकाउन मिल्ने ?
नरेन्द्र मोदीले फोन रिँगाउनु अघि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतासित संवादमा थिएनन् । सरकार छोड्ने उनको कुनै योजना नै थिएन । सरकार छोड्ने प्रसंगबारे सुन्नपनि चाहँदैनथे । तर मोदीको टेलीफोन वार्ता लगत्तै कसरि उनी छलफलको नाटक रच्न थाले ? आखिर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई कसले चलाउँदो रहेछ भनेर खुलस्तसित देखाउन खोजिएको त होइन ? प्रमुख दलहरुबिच आफ्नो देशको राजनितिक मामिलामा बहस हुन नसकेर बिदेशीलाई गुहार्नुपर्ने कुन हदसम्मको देशघाती निर्णय हो यो ? आफ्नो देशको राजनितिक मामिलाका बारेमा छलफल गर्नसमेत बिदेशीले अह्राउनुपर्ने नेताले यो मुलुकलाई संब्रिद्दीको बाटोमा लैजालान्, देशको हितमा काम गर्लान् भनेर कसरि पत्याउने ?
निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न बिदेशीले निर्देशन दिनु पर्ने । प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका मुख्य नेताबिचको संवादको गाँठो बिदेशी प्रधानमन्त्रीले फुकाइदिनुपर्ने । पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने उनैले सिकाइदिनुपर्ने । हाम्रा प्रधानमन्त्री, सरकार बनाउने भनिएका प्रमुख दलका मुख्य नेता, आगामी सरकारको प्रधानमन्त्रीकै दाबेदार, पहिले प्रधानमन्त्री भैसकेका दमदार ठानिने नेतामाथिनै दबाब र प्रभाव पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘तिम्रो देशमा जोसुकैले जितोस हाम्रो पन्जाबाट कोहि फुत्किएको छैन, हामीलाई नटेरी कसैले केहि निर्णय गर्न सक्दैन, पाउँदैन’ भन्ने संकेत दिन खोजेका त होइनन् ? आम नेपालीले असाध्यै आशा गरेको वाम गठबन्दन र यो गठबन्दनको नेत्रित्व गर्ने पार्टीका अध्यक्ष, भावी सरकारको नेत्रित्वकर्तापनि हाम्रै निर्देशनमा नाच्ने हुन् भनेर नरेन्द्र मोदीले वामपन्थी सरकार बन्नु अघिनै आम नेपालीका सामुन्ने हेप्न खोजेका छन् । वास्तविकता प्रस्ट पार्न खोजेका त होइनन् ?
यो आशंका किनपनि बलियो हुँदै गएको देखिन्छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रसितको सहमती तोडेर एमालेले संघिय फोरमसित मिलेर सरकार बनाउन खोजेको सार्वजनिक गरिदिए । प्रचण्डको यो भनाई मोदीले बिभिन्न दलका नेतालाई टेलिफोन वार्ता गर्दै कानेखुशि गरेपछिको हो । मोदीको टेलीफोन वार्ता अघि एमाले र माओवादी केन्द्रबिच यस्तो आरोप देखा परेकोपनि थिएन । मोदीले एमाले र माओवादीसहित वामपन्थी दलहरुको नेत्रित्वमा सरकार बन्न नदिन बिभिन्न दलहरुकाबिच खेल्न थालेको प्रष्ट बुझिन्छ । हाम्रा दल, तिनका नेतापनि मोदीकै भनाईसित पौडी खेल्न थालेको देखिन्छ । किनभने निर्वाचन अघि र निर्वाचनको परिणाम लगत्तै एमाले र माओवादीबिच वाम नेत्रित्वको सरकार बनाउने र पार्टी एकिकरण गर्ने जति बलियो आधार, भनाई र द्रिढता देखिन्थ्यो मोदीको चलखेलपछी त्यो धिमा बन्दै गएको प्रष्टै झल्किन्छ । बरु सतहमा नयाँ नयाँ बिवाद र संभावनाहरुको खोजि गरेका विषयहरु छरपस्ट देखिँदै गएका छन् । एमालेलेपनि अन्य बिकल्पहरु खोजेको देखिन्छ । माओवादी र एमालेकै विचमा पहिले देखिएको विश्वाश र भरोसा बलियो देखिन्न । बरु धर्मराउँदै गएको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: December 23, 2017
hamro ukhan chha ki aaphno dhokako chapi balio sanga lagaune sathilai dosh nadine.aru kura pani aaphu bhalo ta jagat bhalo bhane jastai chha. Arule phone gardaimakin dagmagaune.Aaphai daro bannuhos Modilai Dosh nadinuhos